Ngenisa idatha kwi-OpenStreetMap ukuya kwi-QGIS-Geofumadas
NgoJulayi, 2015 Geospatial - GIS, qgis
Isixa semininingwane ekhoyo OpenStreetMap likhulu kakhulu, kwaye nangona lingahambelani ngokupheleleyo, kumaxesha amaninzi lichanekile ngakumbi kunedatha ngokuqhelekileyo eqokelelwe ngamaphepha amaphepha e-1: 50,000.
Ku-QGIS kukukhulu ukulayisha olu luhlu njengemephu yangemvelaphi njengemifanekiso yeGoogle Earth, apho iiplagi zikhona, kodwa le imephu yangemvelaphi kuphela.
Yintoni eyenzekayo ukuba into oyifunayo kukuba ube ne-OpenStreetMap ungqimba njengevolisi?
1. Khuphela i-database ye-OSM
Ukwenza oku, kuya kufuneka ukhethe indawo olindele ukukhuphela kuyo idatha. Kuyacaca ukuba iindawo ezinkulu kakhulu, apho kukho ulwazi oluninzi, ubungakanani besiseko sedatha buya kuba bukhulu kwaye buthabathe ixesha. Ukwenza oku, khetha:
Vector> OpenStreetMap> Khuphela
Apha ukhetha umendo apho ifayile ye-xml kunye nolwandiso lwe .osm luya kukhutshelwa. Kuyenzeka ukuba ubonakalise uluhlu lwe-quadrant ukusuka kuludwe olukhoyo okanye ngomboniso wangoku wombono. Nje ukuba ukhetho lukhethwe ukwamukela, inkqubo yokukhuphela iqala kwaye umthamo weedatha okhutshweyo uboniswa.
2. Yenza Indawo yogcino lwedatha
Emva kokuba ifayela le-XML likhutshiwe, oko kuyimfuneko ukuyiguqula kwisiseko sedatha.
Oku kwenziwa nge: Vector> OpenStreetMap> Ngenisa i-topology kwi-XML ...
Nantsi siyakucelwa ukuba singene kumthombo, ifayile yeDB SpatiaLite yefayile kunye nokuba sifuna ukuba uqhagamshelo lwangaphandle lufakwe ngokukhawuleza.
Biza umaleko kwiQGIS
Ukufowunelwa kwedatha njengomgca kufuna:
Vector> OpenStreetMap> Thumela i-topology kwi-SpatiaLite ...,
Kuya kufuneka kubonisiwe ukuba siza kubiza amanqaku kuphela, imigca okanye iipoligoni. Kwakhona ngeqhosha lokulayisha ukusuka kwindawo yogcino lwedatha onokuthi udwelise izinto ezinomdla kuzo.
Ngenxa yoko, sinokulayisha umgca kumephu wethu, njengoko kuboniswe kumfanekiso olandelayo.
Kakade ke, ekubeni i-OSM yindlela evulelekileyo yomthombo, kuya kuba lixesha elide kwizixhobo zokuthengisa ukwenza lo hlobo lwento.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-JOSM -I-CAD yokuhlela idatha kwi-OpenStreetMap
Post Next Imibutho yokuDibanisa-Umxholo weGeomatics we-International Informatics Fair 2016Okulandelayo »